Kedu ka ị ga - esi mara ma igwe kwụ otu ebe dabara gị? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ntụziaka Bike dabara - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Ntụziaka Bike dabara - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Kedu ka ị ga - esi mara ma igwe kwụ otu ebe dabara gị?
“Azuokokoosisi ekwesịghị mkpa ibu ibu ma ọ bụ ibu ogologo na-eme kaigwe kwụ otu ebe dabara gị. ” Kwesịrị,gịkwesịrị ịchọ iru iru ebe ikpere aka gị na-ehulata ntakịrịmgbe oleaka gị dị n’elu ihe mkpuchi — n’emeghị ka ọkpụkpụ azụ gị na-ehulata ma na-ehulata iru ihe ntụchi ndị ahụ — maka ezigbo ụzọkwesịrị ekwesị.Ọgọst 25, 2015
Hey ụmụ okorobịa! Ọ bụ Arleigh with Girl Shop Girl, ma taa achọrọ m iji nkeji ole na ole kọwaara gị ihe igwe kwụ otu ebe dabara. Nke a agaghị abụ nnukwu igwe kwụ otu ebe bara uru ma ọlị, mana ọ ga-enye gị isi ngwaọrụ iji hụ na igwe kwụ otu ebe gị ugbu a, ma ọ bụ enwere ike igwe ị na-achọ, dabara gị nke ọma. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-anụ ọkụ ọkụ ịgba ịnyịnya ígwè, ana m akwado itinye ego na igwe kwụ otu ebe.
Ya mere aga m agbanwe ọsọ ọsọ ma banye Jamis Xenith a na anyị ga-enyocha ma nye gị isi ihe m chọrọ iji hụ na igwe kwụ otu ebe ga-adabara gị. (Bike rushes by) (nnụnụ na-ebe ákwá) Ya mere, anyị yi uwe ụfọdụ. Ugbu a, ka anyị kwuo maka ihe ịchọrọ ịgbakọ igwe kwụ otu ebe tupu oge eruo.
Ya mere, ihe mbụ ị chọrọ bụ ezigbo enyi. Ya mere enyi ahụ ga-abụ onye ga-ele gị anya na igwe kwụ otu ebe ma mee mgbanwe ahụ. Ee, ị nwere ike iji enyo mee ya; o siri ike, emere m ya.
Ọ dị ọsọ ọsọ karị mgbe ị nwere enyi na-ele gị anya na-eme mgbasa ozi na-efegharị. Ihe nke abuo bu ihe ndi kwesiri. Imirikiti ngwaọrụ ị ga-achọ nwere ike ịchọta na multitool.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na carbon ị ga-achọ otu torque spana na plumb Bob iji dozie ikpere gị site na iji pedal spindle. Ma n'ikpeazụ, teepu iji tụọ ihe niile mgbe ịmechara. Onwe m, ana m ewere nha tupu m mezie igwe kwụ otu ebe m na mgbe ahụ, ọ bụrụ na ị maara, enwere ike ịme m ihe na-ezighi ezi, ikekwe ikpere m ga-amalite na-afụ ụfụ mgbe m mechara mgbanwe ahụ. na m ga-alaghachi ebe m bidoro iji nke ahụ dịka ntọala kama ịbụ ihe na-enye m ikpere ma ọ bụ azụ azụ.
Yabụ m tinyere akpụkpọ ụkwụ m ma anyị bido tinye Jamis Xenith Endura ndị a nke 1 nwetara site na JensonUSA. Enwere ụzọ abụọ iji mee ka igwe kwụ otu ebe kwụ otu ebe ka o kwe gị mee. Firstzọ mbụ na ọkacha mmasị bụ iji onye na-azụ igwe.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ịnyịnya ọhụụ ma ọ nweghị onye na-enye ọzụzụ igwe kwụ otu ebe, taa a ga m egosi gị otu esi adabere na mgbidi na ọ bụ otu ihe kpatara anyị ji nwee enyi a mee mgbanwe maka anyị ka anyị wee ghara ịdabere, lee anya ma ọ bụ nyefee aka. Na-esote, m ga-edozi oche m n'ogologo m chere na ọ ga-abụ. Ọ bụrụ n’inwee igwe kwụ otu ebe ugbu a nke na-atọ gị ụtọ nke ukwuu, were usoro a.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-ahụ elu nke ukwu anyị ma jiri ya atụ ya, ma ọ ga-adị n'etiti oke nke otu ịdị elu ahụ, ọ dabere ma ị nọ n'okporo ụzọ, igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu ebe na ụdị Akpụkpọ ụkwụ ị na-eyi, mana ọ bụ ezigbo ebe ị ga-enweta inch site na oche ị họọrọ. Na nzọụkwụ ọzọ, m ga-agbanye otu ụkwụ n'elu igwe kwụ otu ebe, dabere na mgbidi, wee pịa ebe dị mma ka m wee ghara ịhapụ mgbidi ahụ. (egwu na-ewuli elu) Ya mere, ihe mbụ anyị chọrọ idozi bụ oche dị elu.
Chọrọ gbagọrọ agbagọ na ikpere gị, agbachighị ya, ọ naghị ewekarị iwe. Yabụ ọ bụrụ na ụkwụ gị dị larịị na okpuru ụkwụ ụkwụ ụkwụ, ihe niile ịchọrọ ime bụ ijide n'aka na ịnwere ikpere ụkwụ gbagọrọ agbagọ. Na nzọụkwụ ọzọ anyị ga-ahụ na oche ahụ dị mma maka anyị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, a na m agagharị gburugburu na-achọ ịchọta ebe ahụ dị nro ma mgbe m chọtara ya, m na-agagharị na-akụ ụda m ma chọta obere eriri n'okpuru ikpere m wee hụ na ọ gafere m. Nke a na - ekwusi ike na a na - eduzi ike a na - atụgharị ụkwụ na enweghị m mgbu ikpere na - ele anya n'akụkụ akwara m, gbaa mbọ hụ na akwara m mechiri emechi ka azụ m adịghị okirikiri nke pụtara na anaghị m eche ntụsara ahụ n'oche ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe abụghị ogologo oge n'oge a. Ihe ịrịba ama ọzọ na igwe kwụ otu ebe adịghị adabara gị bụ na ị na-agbatị n'ubu gị ma ọ bụ n'azụ gị maka njikwa ahụ.
Ọnọdụ ịgba ịnyịnya ígwè kachasị mma nwere ike ịdị ka nke a. Azụ m dị mma ma dịkwa mma ma dịkwa mma, ubu m anaghị agbatị, ikpere aka m dị mma ma nwee ahụ iru ala, anaghị m etinye onwe m aka n'ụzọ ọ bụla. Nke ahụ bụ nnukwu ọsọ ọsọ nke ihe m na-achọ na Av ery basic bike fit.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu mgbanwe, ọ bụrụ na ị nwere mgbu ikpere, ala azụ, ubu, n'ezie, ọ bụrụ na ị na-agbanye (ọchị) ihe ọ bụla dị anya, ọkachasị tọrọ atọ, lee ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe gị, chọta ọkachamara ọkachamara igwe kwụ otu ebe n'akụkụ gị Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ma ọ bụrụ na m na-atụ uche ihe, biko tufuo gị kwuru n'okpuru. Ọ bụrụ na edemede a nyere aka, denye aha ma ọ bụ dịka m na YouTube yabụ amaara m na m ga-aga n'ihu n'isiokwu a maka Bilọ ahịa Bike ghọrọ Nwaanyị. Lezienụ anya maka nyocha isiokwu na-abịanụ nke a Jamis Xenith Endura 1 nke anyị nwere site na JensonUSA.
Ruo oge ọzọ ọ bụ Arleigh na Bike Shop Girl yabụ jide n'aka ịdenye aha, gaa na bikeshopgirl.com na anyị ga-ahụ gị oge ọzọ.
Kedu ụdị ịnyịnya ígwè kwesịrị ekwesị maka ogo m?
Buru ihenha igwe nribụ otu n’ime ihe ndị kacha mkpa mgbe anyị na-ekwu okwuigwe kwụ otu ebekwesịrị ekwesị.
# 1 - Dị MfeNhaChaatị.
Igwe kwụ otu ebeỤbaNha
5'7 '- 5'11' 16 - 17 sentimita asatọ
5'11 '- 6'2' 17-19 sentimita asatọ
6'4 'na toro ogologo 21 + sentimita asatọ
Kedu ka m ga-esi mara ma igwe kwụ m n’ọrụ pere mpe?
Esi mara ma ọ bụrụọ bụpere mpe? Nịmigwe kwụ otu eberuonke giụdịdị (ịdị elu oche, iru, nkwụghachi azụ sadulu, ogwe aka ịnọ elu) wee kwụghachi azụ ma lelee ya.Ọ bụrụọ dị ka ihe na-ezighi ezi ma na-esighi (dịka ụzọỌzọkwaọtụtụ ma ọ bụobereoche, azuokokoosisiỌzọkwaogologo ma ọ bụmkpụmkpụ) mgbe ahụ ọ dị njọ.Jul 3, 2008
Kedu ihe igwe kwụ ịnyịnya 26 pụtara?
Nha ụkwụbụmmesho nke dayameta nke wiil ahụ na taya taya. A na-edetekarị nha na sidewall, dịka ọmụmaatụ ọ nwere ike ịgụ26x 2.2 ”, ugwu di nmaigwe kwụ otu ebenha. Nke a na-egosi na wheel bụ26”Na taya bụ 2.2” obosara. roadzọ ochieanyịnya igwenwere ike ịnwe wiil 27 ″.
Mana ka anyị ruo n’izu a n’izu. Onye mbụ, Blake si 'Bigballer' wee kwuo, sị, 'Enweghị m ike ị nweta ezigbo nguzo na igwe kwụ otu ebe mgbe m nọ n'okporo ụzọ, na-eche na m na-esote igwe kwụ otu ebe na ejighi n'aka ebe m Ekwesịrị m ibubata ibu m ugboro ugboro, ka ọ nwere ihe na-efu? '- Ọfọn, n'izu a anyị ga-aga isi, na mmalite. N’ụzọ bụ isi, hụ onwe gị ka ị na-agbatị na igwe kwụ otu ebe na aka gị gbatịpụrụ agbatị, ụkwụ kwụ ọtọ, wee zuru ike ugbu a gbadata igwe kwụ otu ebe gị.
Nke ahụ na-etinye gị n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Ma isi ọnọdụ ụkwụ gị na igwe kwụ otu ebe. Chọpụta ụkwụ ị na-aga na nke ị nwere iru ala - Ee, nke a bụ ezigbo mkpa iji kpụpụ ụkwụ ụkwụ gị n'ihu.
Na-aga. - Ọ dị mma, ajụjụ na-esonụ. Andrew Davis na-ajụ, 'Enwere m ike ịkụpu oghere n'ime oghere aluminom m iji rụọ eriri ndị ahụ n'ime?' - Agaghị m akwado ya - mba, anyị ‘ekwuru m nnukwu ihe na nke a - Mm, nnukwu mba nka - emela ya, nihi na otu ị ga-eme ka usoro ahụ daa mbà.- Nke ahụ bụ gị.- Ọ gaghị Ma nke ọzọ, echere m na ọ ga-ekwe nkwa, nri? - Eeh.
And ga-enwe ma ọ bụrụ na i mee ị ga-enwe eriri na-ama jijiji.
Ọ dịghị, ọ dịghị mgbe ọ bụla. Ọ gwụla ma ị jidere ya. -Ee.- Ee ee.-Ee, ọ gaghị adị njọ karịa.
Ọ dịghị ka ihe mberede ụgbọ ala. -No.- Ugbo ala nke ochie ga-akawanye njọ karịa afọ. - Ee, ee, ee - O yighị ka ị nwere ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ nke na-eweda ala ma gharazie ịrụ ọrụ.
Yabụ ị naghị edochi ya. Um, ị gaghị enwe ike iji dochie ihe ọkụkụ titanium, dịka ọmụmaatụ. - Ọ dịghị ụzọ - Ọfọn, belụsọ na agbajiri ya. - Eeh. - Ọ bụrụ na ọ dịghị agbajikwa - Edozila ya. - Ọ bụ ya A.
Adịghị m onye mmegide 29er. N'ụzọ ụfọdụ, ọ bụ. Enweghị m. - Anyị na-eche ma ọ bụrụ na setịpụrụ anaghị emegide 29er. - 29er na-amasị m. - O yiri ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya maka ụmụ nwoke buru ibu na-agba ịnyịnya ibu. '- Ee e, odighi mkpa - Mba, ihe m na-ekwu bu na i bu isii; - Ee, a bu m ama ama isii. - feetkwụ isii.
Yabụ ị nwere ike ibido site na otu ihe nhicha, tebụl, otu ụkwụ. Enweghị ụkwụ, ihe ọ bụla. - You're na-anwa ịmụ ihe ugbu a, ọ bụghị ya? Enweghị ụkwụ? - Ee, enweghị ụkwụ, ee - will ga - enweta ya, ị ga - enweta - Enwere otutu. - Ekwuru m, ị mere edemede dị ịtụnanya gbasara aghụghọ asatọ ị kwesịrị ịmụ dị ka onye mbido na ịwụ elu, wee lelee nke a na ikuku.
M ka na-agba ịnyịnya ígwè 26 nke anụ ọhịa. - Eeh. Echere m, 26 inch wiil anọwo gburugburu maka afọ 30 - oh yeah - ha na-arụ ọrụ oke itunanya ọma.
Look dị obere. Ma ha ka na-arụ ọrụ. Na-ekwu maka obere esemokwu.- Ee.- I kwuru, ọ bụghị ya, 29 bụ afọ mmalite maka mgbada.- Kpọmkwem maka mgbada.- Ọ bụghị oke nzuzu.- Oh ee, 27 a ga-agabiga? - Ọ bụ a gburugburu otu Wheel, na-aga gburugburu.- Kpọmkwem.- Dị ka ndị ọzọ.- Ma 26 nke anụ ọhịa ahụ nwere ike ịbụ ihe dị mma maka onye mbido kwa.- Yep. - Nwa okorobịa.
Ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya n'ihe ọ bụla.- Ee, 26 anwụghị anwụ. Kpamkpam kwesiri ile anya, karisie ma oburu na icho ahia.
Dabere n’otú ibu gị dị. Tinye ego ziri ezi. Chọghị ịga ebe ahụ.
Ihe ọ bụla ego a tụrụ aro bụ. Na ujo gị nke ị nwere - Ee. Adịghị m ọkachamara nkwụsị, yabụ ajụrụ m Doddy maka mmalite a ọ sịrị dịka, 'Ee, mee ya.
Ọ dị oke mfe ịme. ”O mere ya n'ezie. Lee anya na nke a.
O mere ya na ngwụsị ụka a n'ihi ụjọ ya. Kwuru na o were nkeji iri. - Lee anya na.
Ọ bụ ụzọ dị mma - ee. Ya mere ee, zụta mkpọ nke tokens - ee - Andrew Brown. 'Have nwere ndụmọdụ ọ bụla banyere otu esi aga nke ọma na mgbọrọgwụ ma ọ bụ ubi okwute?' Achọghị m.
Emeela m - Blake, olee otu ị ga-esi gbanwee nke ahụ? - Ọfọn, ị kwuru na ọ bụ ngalaba ọhụrụ. Ya mere, ihe kachasị mma bụ itinye igwe kwụ otu ebe gị n'akụkụ ụzọ. Ma gafere.
Ga-enweta ya nke ọma site na ịghọta ụzọ dị n'ihu gị.- Ee.- Nke ahụ pụtara na ị ga-eme ya, lelee ya tupu ị kụrụ ya.- Ee.- Ekwela ka edebe ya, gaa ngwa ngwa.- Naanị gaa ngwa ngwa. (ọchị) - Ọsọ abụghị azịza ya mgbe niile.- Mba, mba.- Mgbe ụfọdụ ọ bụ.- Ee.- Ma ọ ga-abụrịrị na ị mere mkpebi a.- Ee. (Ọchị) Omume, omume, omume.
Ọ na-ewe nnukwu okwu niile; ike, itinye uche, lekwasịrị anya - yep. Ihe niile- okwu nro nke putara ihe.- Ee.- Maka na ọ bụ eziokwu.
Naanị ị ga-etinye oge dị ukwuu. - Mkpebi.- Naanị agụụ.- Ee.- Nnukwu agụụ na-agba ịnyịnya onwe gị.- Ọ na-eme.- Um, nke ahụ bụ ihe anyị 'ndị ọkachamara na-emebu' na-ekwupụta.
Echere m na anyị ka bara uru - ee - ụdị dị iche iche dị iche iche - ụdị dị iche iche, ee--am maa ụdị pro dị iche. (Ọchị) Mana gịnị kpatara na anyị anaghị ajụ maka uru a anyị bara? Lee isiokwu a - Downhill onye mmeri ụwa ugboro anọ onye mmeri ụwa.EWS onye mmeri.
Ugboro abụọ downhill World Championship, otu oge Southwest BMX onye mmeri.- M malitere ịnya ịnyịnya mgbe m bụ 14, nke bụ nnọọ mbubreyo.
Ma abụrụ m onye ọkwọ ụgbọala ọkachamara ozugbo m dị afọ 15. Naanị m meghere agbụrụ ahụ ma nwee obi ụtọ n'ebe ahụ. Ma nwee ohere izute ụfọdụ ndị nkwado ma nwee otu site na otu ndị US na-akpọ Sen, nke bụ otu n'ime nnukwu ndị egwuregwu anyị batara n'egwuregwu ahụ wee bịanye aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ m - Blake, ọ bụ ngwa ngwa ngwa ọkụ.
Kwadebe onwe gị - Ee. (Adịgboro ụda egbe) Fire pụọ - Ajụjụ mbụ sitere na Poolehart. Ọ na-ekwu, sị, “Tinye Neil ka o kwere mee.
Dekọ usoro ọgwụgwọ gị dị oke mkpa dịka ihe ọ bụla ọzọ. ”Ọ bụ na anyị ga-eme ya. - Eeh.
Anyị ga. Ajụjụ ọzọ. ”Ka Neil na-eme edemede“ How to Crash ”edemede ya daa,“ Poor chap.
Ọ naraghị ya - nke ahụ ziri ezi. Ọ dị ngwa ngwa Neil - gbakee n'oge na-adịghị anya Neil - John Galvan kwuru, ', nwere ike itinye ndụdụ nkwusioru na-agba n'okporo ụzọ?' Ọ bụrụ n ’ịchọrọ (ịchị ọchị) - ọ bụrụ n’ ịchọrọ - ọ bụrụ n ’ịchọrọ. - Otú ọ dị, ụfọdụ nke obe anyịnya igwe nwere nkwusioru. - Ee ụfọdụ. - dofọdụ na-eme ya. 'Gịnị dị iche ọ na-eme ma ọ bụrụ na ị nwere taya n'ụzọ na-ezighi ezi? Jiri nwayọ.
Ma ọ bụ ihe ihere. (Ọnụ 'M mere ya') - Jordan McCal na-ekwu, 'Ọ bụrụ na m ga - eme' 2 Buy 'm ka ọ bụrụ' Otu Site '? Ọ bụrụ na ị chọrọ.- Ọ bụrụ na ị chọrọ.- Ntak-a? - Ee, gaa na ya - Ee.- Gaa n'ihu Blake.- 'Kedu ihe ị ga-akpọ igwe ọkụ ma ọ bụ dị arọ?' Ana m aga n'etiti.- Ihe niile dị n'etiti.- Ee.- M na-ekwu na amalitere m ịgba ịnyịnya ugwu mgbe ha niile na-ama ifuru.
Ya mere, maka m ha niile dị mfe. - N'oge ahụ, olee mgbe nke ahụ bụ, 19-ihe? - Ọ bụ na 19s. Nu nwere ike kuziri ụmụ nwoke GCN otu esi eme ngwa ngwa ọkụ? Ee anyị nwere ike - Anyị gbalịrị.
Anyị na-eme ya ugbu a. - Eeh. Amaghi ka esi eme ya.
Ikekwe anyị nwere ike ime ka ọ rie ọtụtụ nri. Ka anyị gaa, ọ bụ ya. Ngwọta.- Eme.- Reece Wright na-ekwu, sị: 'Ndi 150 ihu na 140 azụ ga-aga njem Enduro?' - Ee.- Ọ bụ ya.
Nri, ajụjụ ikpeazụ site na, ị nwere ike ikwu nke ahụ? - Guilherme Cameira.- Ka anyị pụọ. 'You dara ada ma chekwaa Neil Special? 'Ooooh.
Eleghị anya ọ bụghị. Ọ bụ ntakịrị ntakịrị. - Ọ bụ ntakịrị ntakịrị. - N’oge na-adịghị anya, abịakwa n’oge. - Ọ bụrụ na ị lelee Instagram ya, ọ ka na - eme ka nkwonkwo ụkwụ ya. - Ka anyị mee ka ọ laghachi azụ n'otu akụkụ. - Ee.- Nice na mma.
Ma anyị ga-eme ya mgbe ahụ. - Na-emekọ. - Anyị mere ya site na ngwa ngwa ọkụ ọkụ enyi.
Ọ na-anya mgbọrọgwụ ngalaba. Ọ chọrọ ndụmọdụ maka otu esi emezi nke ahụ. Ya mere, ka anyị leba anya - lee isiokwu a - hụ ka ọ batara - hụ ya n'ime, enwere m ike ịhụ mgbọrọgwụ - Marwan's Aga m ụdị mpịakọta na ogbugba.
N'ebe ahụ ka ọ nọ. Na. Oh! Kedu ihe ị chere ugbu a? Ka anyị lelee ya ọzọ.- Ee, ka anyị lelee ya ọzọ.- Otu oge ọzọ.
Ihe ijeụkwụ ahụ ziri ezi. Otu ihe na-abata. Echere m na ọ na-aga m ntakịrị oge tupu - Ọ na-aga obere oge.
Ugbu a ị hụla ihe m chere na ị nwere ike ịmụta na nke a, Marwan, na ọ bụghị mgbe niile ka ụzọ esi eme ihe. Echere m na mụ na Blake, ọ bụrụ na m na-ele obere obere vidiyo, ha abụọ nwere echiche dị iche iche ọrụ.
Mana echere m na ị nọ n'etiti isi ihe abụọ ị nwere ike ịnweta. Either ghaghi ibido tupu oge gara aga.- Ee.- Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ị dọtara ihu gị, ebe azụ gị dị.- Ka ha na-akpọ ya American Bunny Hop.- Ma buru ya ụzọ.
Ma ọ bụ ọ ga-abụ na m ga-eji mgbọrọgwụ n'onwe m n'ihi na m na-achọ ka m Kwụpụ ụkwụ ihu.- Ee, jiri nke ahụ dị ka kicker.- Enwere m ike ichere obere oge ma jiri aka jiri aka. bit.- Ee, ee.- Maka na-amasị m Da-Da-Da a, na mgbọrọgwụ - ee - ee - nke ahụ dị mma.
Ma obu n'ezie ị nwere ike ịhapụ ha na ngalaba nkọwa n'okpuru isiokwu a ma anyị ga-eleba ya anya n'izu na-abịa. Biko biko juo. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ edemede anyị ọzọ pịa pịa ebe a ka ịlele Blake ‘BingBomb’ Samson dị ebe a Megavalanche.- Ee ma ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ onye otu ọhụụ ọhụrụ anyị na-ebelata ụzọ ahụ, pịa ebe a na ‘Can Doddy Gbaa ịnyịnya’. - Ee, were pịa ụwa kenye aha GMBN.
Biko biko, n'ihi na anyị na-achọ inweta em. Nye anyị mkpịsị aka aka.
Kwụ gị ọ kwesiri ịmetụ ala n’elu igwe kwụ otu ebe?
Ogologo nkenke gisadulu dị mkpa maka ọnọdụ kachasị mma na ịnya ịnyịnya ibu. Mgbe ị na-anọdụ na sadulu, maụkwụ kwesịrịirualana bọọlụ nkeụkwụ gị kwesịrịịbụimetụ ala. Aka ejiri naigwe kwụ otu ebe gị kwesịrịkwesịrị ka akara nanke gisadulu ma ọ bụ ubé n'elu sadulu.
Ọ ka mma ịnweta obere igwe kwụ otu ebe?
Ọ bụrụ na ị chọrọ ọsọ ọsọ karịa nkasi obi, aobere etitinwere ike dabara gịmma, ọmụmaatụ. Enweghị iwu siri ike na ngwa ngwa ebe a. Nke kacha mmaigwe kwụ otu ebedabara nke gị bụ nchikota nke ndị a niile na ụdị ịnyịnya na mmasị gị.Jun 12, 2020
Ọ dị mma ịnyịnya ígwè 26 dị mma maka ndị okenye?
26'+ Ọkpụkpọ ụkwụ ụkwụ -Adabaran'ihi na afọ 11+ (Ndị a na-classed dị kaokenyeokirikiri.)
Bụ igwe elekere 26 nke anụ ọhịa maka ndị okenye?
N'ihe banyere ịrụ ọrụ,26 sentimita asatọtaya dị mma maka ịgbagharị. A na-emezi nkuku, ịnya n’okporo ụzọ warara na warara. Ha nwekwara obere ihe nke mere na ọ na - adị mfe ma na - amịpụta mgbe ịchọrọ ịga -igwe kwụ otu ebe. Nkwenye bụ na ha anaghị agagharị n'oké nkume na ebe siri ike dịka ụmụ nwanne nne ha.
Yourkwụ gị kwesiri ịkwụ ọtọ mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè?
Mgbe oleị na-agba ịnyịnya ígwè,ụkwụ gị kwesịrịghọọ kpamkpamKwụ ọtọmgbe oleihepedal bụ naiheala ọtụtụ akụkụnkeokirikiri ya. NaiheikpereKwụ ọtọ, naụkwụkpam kpam.Abali 23, 2021
Ebee ka ụkwụ ga-adị na ụkwụ ụkwụ?
Mgbe ịtụkwasị gịụkwụn’elu ụlọ dị larịịpedal, bọọlụ gịụkwụ kwesịrịdị nnọọ n'ihu nkepedalspindle. Ihu ọma eri nkepedal kwesịrịkwado akụkụ azụ nke akụkụ anụ ahụ nke bọọlụ gịụkwụ. Mbebe a na-enye onye na-agba ya ohere iguzosi ike mgbe ọ kwụ ọtọpedal.
Gịnị ka m kwesịrị ịchọ na igwe kwụ otu ebe kwesịrị ekwesị?
'Mkpịsị ahụ ekwesịghị ịdị mkpụmkpụ ma ọ bụ buru oke ogologo iji mee ka igwe kwụ otu ebe dabara gị.' Dị ka ọ kwesịrị, ị kwesịrị ị na-achọ iru ebe aka ikpere gị na-ehulata ntakịrị mgbe aka gị dị na mkpuchi - na-enweghị ọkpụkpụ azụ gị na-ehulata ma na-ehulata iru Ogwe-maka ezigbo ụzọ ịgba ịnyịnya ígwè.
Kedu akụkụ bụ ihe kachasị mkpa maka igwe kwụ otu ebe?
N'adịghị ka ụfọdụ ndị amata amamihe, gị crank ogologo kwesịrị ịbụ proportional ka ụkwụ ogologo na anyị na uche bụ ndị nke atọ kasị mkpa igwe kwụ otu ebe kwesịrị ekwesị oke mgbe elu na ịlaghachi. Nke a ga-akacha bụrụ eziokwu ma ọ bụrụ na onye na-agba ya adịghị mkpụmkpụ.
Kedu otu esi agbakwunye igwe kwụ otu ebe malite na ụkwụ?
Site na nke ahụ, itinye ịnyịnya ígwè n'okporo ụzọ na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ịmalitere igwe kwụ otu ebe ziri ezi ma ọ bụ nke pere mpe, ịnyịnya igwe nke dị nso na oke gị.